Ongororo ye 'Wesens': Hausati Waona bhaisikopo remutorwa seizvi Kare
musha	Varaidzo Nhau	'Wesens' Ongororo: Hausati Waona Mutorwa Firimu SaIzvi Kare
'Wesens' Ongororo: Hausati Waona Mutorwa Firimu SaIzvi Kare
by Brianna Spieldenner March 28, 2022 1,280 maonero
Wesens ndeimwe yeasingawanzo kuwanikwa emifananidzo anotyisa mafirimu anoongorora muhuzivi uye manzwiro. Uye dai izvo zvisina kukwana, inguvawo chidimbu. Iri firimu rekutanga rekuSouth Africa raDerick Muller rinovhura mifananidzo yakawanikwa kune hurefu hutsva uye inoseta mwero wekushandiswa kwemhando yemhando yebhaisikopo remabhaisikopo kunze kwekungobatwa nemaoko.
Kutanga gore rino pa Asina zita Zita Mutambo weFootage, iyo inoratidzira underrated uye yekuedza yakawanikwa mifananidzo uye POV mafirimu, mutambo unoratidza zvakare zvakare kuti vane zvigunwe zvavo pamhepo yezvitsva zviri kuitika mune iyo niche genre.
Mufananidzo unotsigirwa neUnamed Footage Festival
Iyi firimu inotanga neyakajairwa yakawanikwa chirevo chepakutanga, ichitsanangura kuti matepi aya akawanikwa sei mubhokisi kubva kunzvimbo yakafa. Zvinoreva kuti "wakawanikwa mifananidzo." Inoratidza mifananidzo kubva muna 1967 apo boka revashandi vehungwaru rinoenda kunoongorora chirevo chekumhara kweUFO pamunda wemurimi. Vanoperekedza rwendo rwavo rwakareba nedzimwe nhaurirano dzemetaphysical pakufamba muchadenga.
Vanobva vasangana nemurimi wavanoita hurukuro naye inovaraidza, vasati varatidzwa chinhu chisingazivikanwi chiri kutaurwa. Chinhu chihombe, chitema, chinoita zai chinovarovesa nehana. Vanoendesa vamwe vese kure nekutya radiation, vobva vatanga tsvakiridzo yesainzi. Zvisinei, mitemo yavo yakasimba inokanganwika mushure mekunge mumwe wavo abvisa sutu yake yekudzivirira-radiation uye anobata nechinhu chacho, zvichiita sechisina mufungo uye chakakanganiswa mushure.
Iyo firimu inotarisa pane chakavanzika cheicho chinhu uye nei chiripo, chinoyeuchidza zvakanyanya nezve War of the Worlds kuridza redhiyo. Asi pachinzvimbo chekutungamirira kukurwisa kunoshamisa kwevatorwa, inoshanduka kuita inoyevedza yengano yechiAfrikaans inoshanda nesainzi.
Tonally, kunze kwechinguva chidiki chekuseka, iyo firimu yakanyura mune inorota, otherworldly mystique. Iine huwandu hunoshamisa hwehuremu hwepfungwa shure kwayo uye inobvunza mibvunzo isina kugadzikana pamusoro pemamiriro evanhu.
Wesens inopinda muchirevo chekare chekungoti tinogona, hazvireve kuti tinofanira. Vamiririri mune izvi vari kushanda kubva kuruzivo rushoma rwezviri kuitika, asi vachiri kutungamira chinhu, vachisimbisa kutonga kwavo pamusoro pacho, vachiita zviedzo zvavasingazive zvinogoneka.
Zvinoita kunge zviri kutaura nezve nhoroondo yezvematongerwo enyika yeSouth Africa, kunyanya colonialism uye kuipa kwayo.
Sekusvika kwemafirimu emafirimu anoenda, zvakasarudzika kuve chidimbu chenguva kunyanya kumashure uko, chimwe chete chinouya mupfungwa chiri. Mauto aFrankenstein, izvo zvakanyanya, zvakasiyana. Zvinotora pane inoyevedza square aspect ratio ine makona akatenderedzwa uye yegrany, sepia-toned mufananidzo wakaringana panguva yacho.
Pasinei nekukanganisa kwemidziyo, iyo cinematography ichiri kushamisa nemamiriro ekunze anoratidzwa mune yakanakisa ruzivo, sezvo inoitika kunze zvachose.
Ipo ichitanga kuita senge chinyorwa nezve chiitiko chakaita saRoswell, inokurumidza kupinda mu… chimwe chinhu. Panzvimbo peimwe bhaisikopo rinofambiswa nechiito, rinoratidzika kunge raPeter Weir Pikiniki paHanging Rock. Zvisinganzwisisike uye surreal, iyi firimu inoda kuti iwe ubvunze mibvunzo nezve nzvimbo yemunhu mupasirese uye mhedzisiro yezviito zvedu.
Iyo ruzha dhizaini uye zvibodzwa zvakare maratidziro emufirimu, sezvo achibatsira mutoni ye surreal yefirimu uye zvakare ine dzimwe nyika dzinonakidza dzekuSouth Africa.
Emotional, yakanaka uye isingatyi, Wesens inonakidza yekupinda mune yakawanikwa footage horror genre uye ichagara iri mupfungwa dzako mushure. Kubatanidza metaphysical sci-fi neAfrica mythology, firimu iri rakasiyana zvachose uye rinofanirwa kuonekwa. Sezvo ichangotanga muAmerica, hapasati pave nezuva rekuburitswa kwayo. Tarisa turera pazasi.